2 Me de, mekae wɔ me komam sɛ:+ “Bra na memfa anigye+ nsɔ wo nhwɛ, na hu adepa nso.”+ Hwɛ! ɛno nso yɛ ahuhude. 2 Misee ɔserew sɛ: “Abɔdansɛm bɛn ni?”+ Na misee ahurusidi+ sɛ: “Dɛn na worekyerɛ yi?” 3 Mede me koma hwehwɛɛ mu, de nsã gyee m’ani,+ nso mede nyansa kyerɛɛ me koma kwan,+ sɛ meso nkwaseasɛm mu akosi sɛ mehu adepa a ɛwɔ hɔ ma adesamma, nea wɔyɛ ɔsoro ase wɔn nkwa nna nyinaa mu.+ 4 Meyeyɛɛ nnwuma akɛse.+ Misisii adan,+ na meyeyɛɛ bobe nturo.+ 5 Meyeyɛɛ nturo ne mfikyifuw,+ na miduaa nnua a ɛsow aba nyinaa bi wom. 6 Meyeyɛɛ atare+ de guguu m’afuw mu nnua a ɛrenyin no so.+ 7 Minyaa nkoa ne mfenaa,+ ne nkoa mma wɔ me fie.+ Afei nso minyaa nyɛmmoa, anantwi ne nguan akuwakuw pii sen wɔn a wodii m’anim Yerusalem nyinaa.+ 8 Bio nso meboaboaa dwetɛ ne sika+ ne afei ahene ne ahemman ademude ano.+ Minyaa mmarima ne mmea nnwontofo+ ne nea ɛma nnipa mma ani gye,+ mmabaa bebree kwa.+ 9 Meyɛɛ kɛse, na minyaa ahode pii sen wɔn a wodii m’anim Yerusalem nyinaa.+ Me nyansa nso de, ammɔ me da.+ 10 Biribiara a m’aniwa hwehwɛe no, mamfa ankame no.+ Mamfa anigye biara ankame me koma, na m’ani gyei adwuma a mebrɛ yɛe nyinaa mu;+ eyi ne me kyɛfa wɔ adwuma a mebrɛ yɛe nyinaa mu.+ 11 Me de, mitwaa m’ani hwɛɛ adwuma a mede me nsa ayɛ nyinaa ne adwuma a mabrɛ ayɛ,+ na hwɛ! ne nyinaa yɛ ahuhude ne adehunu akyidi,+ na biribiara so nni mfaso owia ase.+ 12 Bio nso, mitwaa m’ani hwɛɛ nyansa+ ne adammɔ ne nkwaseasɛm;+ dɛn koraa na onipa a obedi ɔhene akyi aba no betumi ayɛ? Nea nnipa ayɛ dedaw no ara bi na ɔbɛyɛ. 13 Na me de, mihui sɛ mfaso wɔ nyansa so sen nkwaseasɛm,+ sɛnea mfaso wɔ hann so sen sum no.+ 14 Onyansafo de, n’aniwa wɔ ne tirim;+ na ɔkwasea de, esum mu ara na ɔnam.+ Nea me nso mabehu ne sɛ ewie wɔn nyinaa pɛ.+ 15 Me de, mekae wɔ me komam sɛ:+ “Sɛnea ewie ɔkwasea+ no, me nso saa ara na ebewie me.”+ Ɛnde mebɛyɛɛ onyansafo pii saa+ yɛɛ dɛn? Enti mekae wɔ me komam sɛ: “Eyi nso yɛ ahuhude.” 16 Onyansafo ne ɔkwasea nyinaa, wɔrenkae wɔn daa.+ Ɛrenni da bi, wɔrenkae obiara bio; na ɔkwan bɛn na onyansafo bɛfa so awu? Ɔne ɔkwasea nyinaa na ɛnam.+ 17 Asetena fonoo me,+ efisɛ m’ani so no, adwuma a wɔyɛ owia ase no yɛ ɔbrɛdwuma,+ na ade nyinaa yɛ ahuhude ne adehunu akyidi.+ 18 Na me de, metan adwuma a mebrɛ yɛe owia ase nyinaa,+ sɛ merebegyaw ama onipa a obedi m’akyi aba.+ 19 Na hena na onim sɛ ebia ɔbɛyɛ onyansafo anaa ɔkwasea?+ Nanso obedi m’ade a mebrɛ yɛe ne nea mede nyansa yɛe owia ase nyinaa so.+ Eyi nso yɛ ahuhude. 20 Na me de, medan me ho sɛ mɛma me koma adi awerɛhow+ wɔ adwuma a mebrɛ yɛe owia ase no nyinaa ho. 21 Efisɛ obi de nyansa ne nimdeɛ ne nsi brɛ yɛ adwuma,+ nanso onipa a wammrɛ ho na wɔde ne kyɛfa bɛma no.+ Eyi nso yɛ ahuhude ne ɔbrɛ hunu kɛse.+ 22 Na sɛ onipa brɛ ne ho yɛ adwuma na ne koma pere adwuma a ɔyɛ owia ase ho a, dɛn na onya?+ 23 Ɛyaw ne ahometew nko ara na ɛwɔ n’adwuma mu, ne nna nyinaa,+ na edu anadwo nso a, ne koma ntumi nna.+ Eyi nso yɛ ahuhude ara kwa. 24 Onipa wɔ hɔ yi, biribi pa bi nni hɔ mma no sɛ obedidi na wanom na wama ne kra ahu adepa, ne brɛ mu.+ Eyi nso mahu, na minim sɛ efi Onyankopɔn nsam.+ 25 Na hena na odidi+ nom yiye sen me?+ 26 Nea ɔyɛ onipa pa nokware Nyankopɔn anim+ no, ɔma no nyansa ne nimdeɛ ne anigye,+ na ɔdebɔneyɛfo de, adwuma a ɔde ama no ne sɛ ɔmmoaboa ano mfa mma onipa pa no.+ Eyi nso yɛ ahuhude ne adehunu akyidi.+